Ibhokisi le-Android TV elihamba phambili (2020) - Kumele Ufunde (Izibuyekezo) - Ezokuzijabulisa
Ibhokisi le-Android TV liyinkundla yokuzijabulisa ye-TV esekwe ku-Android futhi ephethwe yi-Google. Kunezinto eziningi ezinhle kakhulu ongazifeza nge-Android TV Box. Eqinisweni, amathuba awanamkhawulo.Kunamabhokisi amaningi we-set-top avela kuXiaomi, NVIDIA, nokunye okuningi. Kepha, kunzima kakhulu ukuhlunga okuhle kokubi.
Amanye amabhokisi we-Android TV afana ne-Nexus Player neRazer Forge TV anqanyuliwe.Ezinye, njenge-Sharp AN-NP40 neCCC Air Stick, azitholakali e-U.S.Yingakho sibhale amabhokisi amahle kakhulu we-Android TV ne-Android TV atholakala emakethe njengamanje.
I-Android TV ikuvumela ukuthi usakaze kalula okuqukethwe ku-TV yakho, futhi futhi ikwenza ukwazi ukulanda izinhlelo zokusebenza kuGoogle Playstore.Uma ufuna i-Android TV Box emangalisa nje futhi etholakalayo ukuthengwa, ufike endaweni efanele.
Amabhokisi we-Android Tv ahamba phambili:
1.I-NVIDIA Shield TV -
I-NVIDIA Shield TV ithathwa njengenye yamabhokisi we-Android TV amahle kakhulu emakethe njengamanje.Inezici ezifana nokufinyelela ku-Google Play Isitolo futhi isekela i-Google Assistant ngesilawuli kude esihlonyiswe imakrofoni. Ibuye ibe ne-NVIDIA GameStream, ekuvumela ukuthi usakaze imidlalo kusuka kuma-PC ngamakhadi wehluzo weGeForce GTX ahambisanayo neGeForce MANJE.
E-China, i-NVIDIA Shield TV inenye into emangazayo: Imidlalo ye-GameCube ne-Wii evela ku-Nintendo.Abanikazi beShield TV eChina nabo bayakwazi ukufinyelela kwiNew Super Mario Bros, iSuper Mario Galaxy, neminye imidlalo eminingi.
Kunamabhokisi ambalwa kakhulu e-Android TV anerimothi ye-IR engakwazi ukulungisa ivolumu ye-TV yakho bese uyayivula futhi uyicime futhi le-NVIDIA ingenye yazo. MinaUma ulanda futhi ufake ukwakheka okuqondene neShield TV kwe-Plex, iShield TV iba iseva yemidiya egcwele efakiwe engaba wusizo ekutholeni, ekudonseni, ekuhleleni nasekusakazeni ama-movie, imibukiso ye-TV, nomculo oku-intanethi.
Izici zifaka phakathi:
I-NVIDIA Tegra X1
I-256-core Maxwell GPU
I-USB-A 3.0 (2)
Isihlangu Stand (ukuma mpo)
Isilawuli seNVIDIA Shield
I-NVIDIA GeForce Manje
Imidlalo yeNintendo GameCube neWii eChina
2.Ibhokisi le-Airtel Xstream -
Guqula i-TV yakho ibe yi-TV Box emangalisayo ngesipiliyoni sokubuka esiyingqayizivele nesipholile ngokucaca okumangazayo kwesithombe.Kukhona ukuzijabulisa okungenamkhawulo ngokuqukethwe okumangazayo okuku-inthanethi kanye neziteshi zakho ze-TV.
Ukusesha Ngezwi - Ungasho nje Ukuthi Useshe
Ikhwalithi Yesithombe esingu-4K
Sebenzisa i-smartphone yakho njenge-Remote ukulawula idivayisi
Sakaza Ngqo ku-TV yakho Kusuka efonini yakho ephathekayo
ungathola Ukufinyelela Kuzinhlelo Zokusebenza Ezingaphezu Kwama-5000 Nge-Android TV Play Store
3. I-Ml Box S Android Version 9.0 -
Ungaxhuma kalula ezweni lokuqukethwe nokuzijabulisa ekhaya ngale Bhokisi le-TV elimangalisayo. Isebenza nge-Android TV 8.1 yakamuva. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, isekela izilawuli zezwi nezinhlelo zakho zokusebenza ozithandayo ezifana neNetflix, i-YouTube, iSlingTV, nokunye okuningi!
Ungathola ukubonwa okuhle kwe-4K HDR. Bukela imidlalo oyikhonzile ye-TV, dlala imidlalo noma ubuke izindaba noma ulalele umculo.IMi Box ikuphakamisa namavidiyo asuselwa ekuthandeni kwakho nge-YouTube.
Inesici se-Voice Control: iza noMsizi weGoogle naku-Apps search search. Sesha izithombe noma uhlole isimo sezulu noma usethe i-alamu. Konke kumane nje ngokulawulwa kwezwi.
Iza ne-Android 8.1: Jabulela inguqulo yakamuva ye-Android TV 9.0 engasetshenziswa ngemuva kokuyibuyekeza, ilungele ukuzijabulisa kwasekhaya, itiyetha lasekhaya nokunye okuningi
I-Amazon Prime Video ingadlalwa kuphela ngemuva kokuthi ubuyekezele ku-Android 9.0. Ungayibuyekeza ngenketho yokubuyekeza isoftware ngemuva kokuqeda ukufakwa.
Ukucaca Okuphezulu kwe-4K HDR: Isixazululo se-4K Ultra HD kanye neRig Dynamic Range (HDR)
Ungafinyelela kokuqukethwe okuningi: Ukufinyelela kuziteshi nezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kuka-3000 +, ungajabulela ama-movie neziqephu ze-TV ezivela kuNetflix, YouTube nakwezinye eziningi.
Inekhono Lokugcina Eliphezulu kakhulu: inikeza ukunikezela okusheshayo nokuzinzile ukujabulela isipiliyoni sevidiyo esezingeni eliphezulu ekhaya nale Bhokisi le-Android Tv.
4.BORSSO T9 Android TV Box -
Ngaleli Bhokisi le-TV, ayikho imininingwane eyodwa engaphuthelwa ngenkathi i-movie yakho nemidlalo iku-4K Ultra HD. Le divayisi inokusebenza okusha kwe-OS kwe-Android 9: Leli bhokisi le-smart TV lisebenzisa isistimu yokusebenza yenguqulo ye-Android 9. Imisebenzi yayo iyashelela futhi iyashesha.
Lungela ukuqala ukushisa imibukiso yakho ye-TV oyithandayo noma ama-movie ngenqwaba yezinhlelo zokusebenza zokusakaza eziza kubhokisi le-TV noma ezitholakala esitolo sohlelo lokusebenza.Izimbobo ezimbili ze-USB zingaxhunywa negundane lakho nekhibhodi ukukusiza ukuthi usebenze kalula.Inenketho yesilawuli kude ekuvumela ukuthi ujabulele isipiliyoni.
I-Android 9.0 Rockchip
I-Android 9.0 OS ene-WiFi ne-Bluetooth
I-RAM ne-ROM: 4GB + 32GB.
I-Smart Wifi ene-Screen Mirroring
Inikeza iwaranti engu-1 yokufaka esikhundleni sama-Smart TV BOX Projectors
Izinto ongazenza ngamabhokisi we-Android Tv:
Ungasakaza, ubuke ama-movie, izinhlelo ze-TV, namavidiyo -I-Android TV Box inakho konke okudingayo futhi iyithuluzi elihle lokulawula i-Home Media Center yakho. Ungakwazi kalula Sakaza amavidiyo nge-Youtube mahhala noma jabulela nje Amavidiyo we-Amazon Prime futhi Okubhaliselwe kwe-Hulu Izinsiza Esikrinini Esikhulu. Kunezinsizakalo eziningi zamahhala nezikhokhelwayo zevidiyo kunetha. Iziteshi zamahhala zifaka phakathi i-Crackle, Sports Illustrated, Tubi TV, NewsOn, PBS, PBS Kids, PopcornFlix, Twitch.
Dlala amageyimu, ukugembula kwe-retro, nokusakaza kwegeyimu -Uma ungumlutha wegeyimu noma uthanda ukudlala imidlalo kwesinye isikhathi ukuvumela ubuchopho bakho buthathe ikhefu, ungaba nezigidi zemidlalo etholakalayo ku-Google Play Isitolo. Iningi labadlali bathanda ukusebenzisa i-Android TV Box (ATVB) ukudlala imidlalo emidala kuma-consoles amadala njengeSuper NES, Neo Geo, Megadrive, Gameboy Advance, Gameboy, NEC PC Engine njalonjalo. I-Retro Gaming nayo kungenzeka ngama-Emulators we-Android. Nge-ATVB ungahle futhi usakaze Imidlalo yakho isuka kwi-PC iye ku-TV yakho. Unezindlela eziningi kakhulu zokuzidlala kulolu hlobo lwedivayisi.
Sebenzisa ngaphezu kwezingu -3.5 million zezinhlelo zokusebenza ezitholakala ku-Google Play Isitolo -Ngezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kwezigidi eziyi-3.5 ezitholakala ku-Google Play Isitolo, i-ATVB (i-Android TV Box) ikuvumela ukuthi uthokozele izigidi zezinhlelo zokusebenza. Okuhle kakhulu ukuthi, zonke Izicelo ozisebenzisa ku-Smartphone noma kwi-Tablet yakho zilapha ku-TV yakho manje. Uzohlala uthola okuthile okusha ongakwenza Njalo Ngosuku Olodwa ngoba kunezinhlelo zokusebenza eziningi kakhulu ezengezwayo nsuku zonke.
Inguqulo ethuthukisiwe yeNetbook -Lapho iNetbook iqala ukubonakala, yayingathandwa kakhulu. Bengiyitholile futhi bekupholile ngokumangazayo ukuzama ukwenza zonke izinto ofisa ukuzenza online njengokuthenga online noma ukuhlela amanye ama-Office Documents kwi-Android TV Box. Ikuvumela ukuthi wenze lokho nokunye okuningi.
Dlulisa amehlo kwimidiya yakho yezenhlalo -Sonke sisebenzisa imithombo yezokuxhumana kumafoni ethu. Yebo, ukusebenzisa iSocial Media kwi-Smartphone kuhle, kepha ukuphequlula i-Facebook, Instagram, ne-Pinterest kwi-Big Screen kuyinto ozoyithanda nakanjani. I-Android TV Box ikuvumela ukuthi wenze lokho.
Ukubukwa kwesikrini -Isikrini Ukubukisa kungumsebenzi okuvumela ukuthi uthumele imininingwane onayo ku-Smartphone noma kwi-Tablet Screen yakho kwamanye amadivayisi, njenge-TV yakho. Ungakwenza lokhu ngokufaka Izinhlelo Zokusebenza ku-ATVB, lapho-ke ungenza lo msebenzi usebenze kumafoni akho. Lokhu kusebenza i-iPhone, i-iPad, i-Android Smartphone, neThebhulethi kanye ne-PC noma iMac yakho. Ungabelana ngamavidiyo, izithombe, imidlalo, amadokhumenti, njalonjalo. Ungabelana kalula nganoma yini nomndeni wakho nabangane ngqo ku-TV yakho.
Ingqungquthela Yevidiyo -Kunezinye izinto eziningi ezipholile ongazenza nge-Android TV Box (ATVB) neVideo Conference ingenye yazo! Ake sithi, kunomcimbi omkhulu noma umsebenzi emndenini wakho futhi umyeni wakho usohambweni lwebhizinisi kude nasekhaya. Kepha, futhi ufuna ukuthi akwazi ukwabelana ngalesi sikhathi esiyigugu nawo wonke umndeni. Yini ongayenza lapho? Impendulo ilula impela. Ingqungquthela Yevidiyo. Ukuphela kokufanele ukwenze, xhuma i-Camera neMakrofoni ku-Android TV Box yakho (ATVB) bese ufaka i-App efana ne-Skype, bese usuqedile. Manje usungawujabulela lo mcimbi ongalibaleki nawo wonke amalungu omndeni.
Nge-Android TV, ungakwazi kalula usakaze kalula kusuka efonini yakho ; kungaba i-YouTube noma i-intanethi, ungabuka noma yini oyithandayo. Ibhokisi le-Android TV likuvumela ukuthi usebenzise i-Google Play Isitolo engakusiza ukulanda izinhlelo zokusebenza futhi ezinye izinsiza ezinjengeNetflix noma iHulu . Ikuvumela ngisho landa imidlalo kuthelevishini yakho. Isebenziseka kahle kakhulu. Ungathenga futhi uzibonele ukuthi kusebenza kanjani!
amasayithi amahle wokubuka ama-movie wamahhala
bukela imibukiso ye-tv yamahhala ku-inthanethi ungabhalisi
Ama-movie ayi-123 avele ahambe nawo
ama-movie wamahhala ngaphandle kokungena ngemvume
isebenza kanjani isikhathi sokubonisa nganoma isiphi isikhathi